रामचन्द्र पौडेल र महन्थ ठाकुरबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ? - Nepal Daily
शनिबार, २५ बैशाख २०७८ Sat, 08 May 2021
रामचन्द्र पौडेल र महन्थ ठाकुरबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
सोमबार, २३ चैत्र २०७७, ०७ : ४८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सत्ता समीकरणको राजनीतिमा तानातानमा परेका छन्। सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नयाँ सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको नेपाली कांग्रेसले जसपालाई आआफ्नो कित्तामा उभ्याउन वार्ता गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि ठाकुरसँग संवाद जारी राखेको छ। यसैक्रममा आइतबार ठाकुरसँग नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भेट गरेका छन्।
पौडेल ठाकुरलाई भेट्न आइतबार बिहान उनको निवास सानोठिमी पुगेका थिए। नयाँ सरकार निर्माणमा नेपाली कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने कुरा भेटमा पौडलले बताएका थिए। पौडेलले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको र उनलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनुपर्ने बताएका थिए। ठाकुर निकट जसपाका नेता डा।सुरेन्द्र झाले पौडेलले नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा कुराकानी गरेको जानकारी दिए। पौडेलले शेरबहादुर देउवाबाहेक अर्को व्यक्तिलाई पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न सक्ने धारणा राखेको झाले बताए। ‘कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ। तर नयाँ सरकारको नेतृत्व देउवाबाहेक अर्को व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ भन्ने धारणा पौडैलजीको रह्यो’, झाले भने, ‘उहाँले अर्को व्यक्ति को हुन सक्छ भन्नेबारेमा भने खुलाउनु भएन।’
नेता झाका अनुसार भेटवार्तामा जसपासँग छलफल नै नगरी कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णयप्रति ठाकुरले आपत्ति प्रकट गरेका थिए। ‘कांग्रेसले अन्य पार्टीहरूसँग छलफल गरेरमात्र नेतृत्वको विषय टुंग्याउनुपर्नेमा पहिले नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ’, झाले भने, ‘यो भनेको अर्घेल्याइँ गरेको जस्तो देखियो।’
पौडेलसँगको भेटमा ठाकुरले जसपाले उठाउँदै आएका मुद्दा जसले पूरा गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने पार्टी नीति रहेको बताएका थिए। पछिल्लो समय ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि निरन्तर छलफल र सम्पर्कमा छन्। ठाकुरसँग अहिले ओली, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सत्ता समीकरणमा साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन्। तर ठाकुर भने ओलीसँग निकट देखिएका छन्।
सांसद संक्रमित भएको बाहनामा विशेष अधिवेशन स्थगन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को तयारी !
राजनीतिक रुपमा आफ्यारो मोडमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्‍ बैठक
दुई समूहबीचको वार्ता सफल नभइरहेको बेलामा ओलीलाई नेपालले दिए यस्तो चेतावनी
ओली मौन बस्दा दोस्रो तहका नेताहरुको प्रयास व्यर्थ
कोरोना संक्रमणबाट एकै घरका तीन दाजुभाइको मृत्यु
टिकटकले लियो युवकको ज्यान
मध्यरातमा ओली-नेपालबीच भद्र सहमति: राष्ट्रपति भण्डारी साक्षी
संक्रमितको नयाँ रेकर्ड–थप नौ हजार ७० जनामा संक्रमण पुष्टि
देउवा निवासबाट निस्किएका माधव नेपाल राष्ट्रपति भेट्न शितल निवासमा पुगे
माधव नेपाल बाहिरिए लगत्तै शीतल निवास पुगे प्रधानमन्त्री ओली
देउवा निवासमा कांग्रेसका नेताहरूसँग एमाले नेता भीम रावल छलफलमा
किन बोलायो काँग्रेसले हतार हतार संसदीय दलको बैठक ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक जारी
वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकामा यातायात बन्द गर्ने निर्णय
अवको तीन महिनामा तीन लाखलाई कोरोना हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान
सीसीएमसीका बैठकले गरेका निर्णय
राष्ट्रवादी भनिएका ओली भारतको टाङमुनि छिरिसके : देउवा
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
तत्कालै बैठकस्थल छोड्न माधव नेपाल समूहलाई प्रहरीको दबाब